Hindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliye ay ka hayso – DMS
HomeWararkaHindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliye ay ka hayso
Dowladda Hindiya ayaa Pakistan u dirtay dalab ah siideynta duuliyihii mid kamid ah diyaaradaha Hindiyo oo ay shalay soo riday dowladda Pakistan oo ay gacanta ku hayaan xilli ay cirka isku shareertay xiisada u dhaxaysa labada dal.
Baraha bulshada iyo warbaahinta qaarkood ayaa shalay lagu soo bandhigay sawirada duuliyaha Hindiya oo gacmaha ka xiran, waxaana sawiradaas Hindiya ku sheegtay inay tahay mid lagu niyad jabinaya qof dhaawac ah.
Dowladda Paksitan ayaa sheegtay inay soo riday laba kamid ah diyaaradaha dagaalka dalka hindiya, iyada oo ka jawaabeysay duqeyn dhinaca cirka ah oo diyaaradaha Hindiya ay la beegsadeen xarumo ay leeyihiin maleeshiyad oo ku yaala gudaha Pakistan.
Xiisada u dhaxaysa labada dal ayaa u muuqata mid sii xoogaysatay, waxaana saacadihii la soo dhaafay dhacay weeraro laba ah kuwaas oo labada dhinac ay guulo ka kala sheegteen.
Arbacadii Maraykanka ayaa waxa uu Hindiya iyo Pakistan ugu baaqay inay ka baaqsadaan tallaabo kale oo milateri, hayeeshee weli labada dowladood aysan jawaab ka bixin.